ဟယ်ရီပေါ်တာစာအုပ်သစ်သည်အသုံးပြုသူများကိုမကြိုက်ပါ eReaders အားလုံး
အသုံးပြုသူများသည် Harry Potter စာအုပ်အသစ်ကိုမကြိုက်ကြပါ
အကယ်၍ သင် Harry Potter ပရိသတ်များဖြစ်ပါက၊ Pottermore site မှ ebook အသစ်သုံးခုထုတ်ဝေမည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ ယခုလက်ရှိ ebooks သုံးမျိုးအနက်တစ်ခုအားထုတ်ဝေထားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များမှာအားလုံးမကောင်းသောပုံရသည်။
ထင်ရှားစွာ JK Rowling မှအသစ်သောစာအုပ်များမရှိပါ ၎င်းအစား၎င်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာ Pottermore တွင်ရိုလင်၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများနှင့်စာတမ်းများကိုစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ သောကြောင့် များစွာသောအသုံးပြုသူများကိုချွတ်ဝမ်းခွဲခံစားရတယ်ပါပြီ သူတို့ကဒါကိုစပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။
စာအုပ်တွေရှိတယ် $3တစ်ခုချင်းစီမှာစျေးနှုန်းPottermore တွင်သီးသန့်ရရှိနိုင်သောအရာ။ အသုံးပြုသူအချို့၏ဆန္ဒပြပွဲများမတိုင်မှီ၊ ဆိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုက ebook များသည်ပစ္စည်းများစုစည်းထားကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်ဘလော့ဂ်ထုတ်ဝေခြင်းထက်ပိုမိုလွယ်ကူ။ စာဖတ်လွယ်လွယ်သောပုံစံဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Pottermore သည်၎င်းကို၎င်း၏သုံးစွဲသူများ၏တောင်းဆိုမှုဖြင့်သာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ebook အတွင်းရှိဘလော့အားလုံးပါဝင်သောတောင်းဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ပစ္စည်းအသစ်အဖြစ်ကြော်ငြာ?
အမှန်တရားကနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်တွေမှာဖြစ်တယ်၊ ဤအ ebooks ၏ကြေငြာချက်အသစ်သောပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်သောပါပြီထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများစွာသည်ပြိုကွဲသွားသည်ကိုမအံ့သြသင့်ပါ ဤ ebooks များသည်ဝက်ဘ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည် သူတို့အောင်မြင်ခဲ့ပုံရသည် သင့်တော်တဲ့နည်းနဲ့လား။
ဤအရာများရှိသော်လည်းမကြာသေးမီက Pottermore ၏သတင်းအချက်အလက်သည်တိကျမှန်ကန်ပြီးသုံးဒေါ်လာအတွက်အသုံးပြုသူသည်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုအချိန်ကုန်သက်သာစေနိုင်သည်မှာမှန်ပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုငွေပမာဏကိုသိမ်းဆည်းရန်အမြဲရွေးချယ်နိုင်သည်၊ Pottermore ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုတစ်ကြောင်းချင်းစီတင်ပို့ပါ နှင့် ebook ကိုကိုယျ့ကိုယျကိုဖန်တီးပါ။ ဒါပေမယ့် အတူတူဖြစ်လိမ့်မည်နည်း သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » Software များ » eBooks » အသုံးပြုသူများသည် Harry Potter စာအုပ်အသစ်ကိုမကြိုက်ကြပါ
Nexus7အသစ်သည်စာဖတ်ခြင်းအတွက်မဟုတ်ပါ